abalandeli abaningi online umdlalo World of Tanks ujwayelene kakhulu nge self ezinezinjini ukufakwa ephezulu amandla wezikhali ngokuthi "Into 261". Gamers ngobuqili abhubhise izitha, ukushayela le Arta, kodwa ezimbalwa bazi ukuthi ACS akukaze iqhaza kunoma iyiphi impi. Cabangela indaba ukudalwa wezikhali iyunithi.
SAU "Into 261": konke kwaqala kanjani
Naphezu uchungechunge kwezithiyo ukuthi nokho ngehlelwe yilokhu odlule ACS, ubuholi Soviet ngisho impi akuwenzanga umqondo wagqoka chassis self ezinezinjini esindayo duty isibhamu. Lokhu isibhamu self ezinezinjini yasungulwa ngu design bureau of Leningrad Kirov Plant kanye Chelyabinsk. A isisekelo sokuthuthukiswa a ACS entsha uye abe intandokazi nabadlali of tank 7 EC. Le phrojekthi waqala ukuba athuthukiswe lokhu isibhamu ukukhweza ngokushesha ngemuva kokuphela kweMpi Yezwe II futhi laqedwa ngo-1947. Motor onjiniyela esetshenziswa umkhumbi udizili powerplant M-50 anda amandla, ngokwemvelo, kuqala yokuvumelana ukuze ethangini. "Into 261" ahlonyiselwe kancane armored deckhouse ezivulekileyo ezingenaso ibekwe enamandla kakhulu isibhamu M-31 (152mm).
KB feat isitshalo №172
It ngokukhethekile kule phrojekthi wadala ekuklanyweni ehhovisi Perm ifektri №172. A isizinda wakhonza njengomdala wezikhali kuqhubeke isibhamu BR-2. M-31 ukuze asindise iye ahambisana isibhamu M-tank 51 ka ngetincenye netindlela. Uhlolo lokuqala M-31 wazalwa ngo-October 1948. Abaklami kuthiwa kangaka olwesimanje Br-2, okuyinto kwakunzima ngempela ukuthola izakhi ezivamile kulezi ngetinsimbi letimbili. KB isitshalo №172 labetibambile umsebenzi omkhulu ngempela, isibhamu esisha kusukela yayo eyandulela khona ovelele nhlonhlo ovundlile esangweni semiautomatic, ngokungafani kule piston Br 2. Ngaphezu kwalokho, enomuzi umqhewu kunalokho enamandla nomlomo ukubopha, uyakwazi iyavuleka amandla ukufinyela ku-70%. Gun emgqonyeni kwaba ifakwe breech okukhulu kakhulu ukuthi kuzoqinisekisa mass oyifunayo ngokuhambisa izindlela, futhi kwaba nomthelela sekulinganisa kangcono liyaphambuka ingxenye.
Isimiso ezisebenza isibhamu
Ilayisha isibhamu esisha kwaba ehlukile-case. I projectile kufanele zithunyelwe entwasahlobo ukulayisha induku, cocking ngokuzenzakalela ngesikhathi buyisela emuva. Ngaphezu kwalokho, lo mshini obhekene isisu umgqomo, futhi wasebenza mode othomathikhi. Isebenzisa umoya onomfutho, lowo isilinda ekhethekile. Brake ukufinyela wokubacindezela kusukela isibhamu recuperator womoya, amasilinda yalezi amadivaysi isandla exhunywe kwi-emgqonyeni. Ngenxa yalokho, ngenxa breech uhlelo isibhamu ukufinyela futhi ukwandisa ingxenye isisindo ukufinyela. Lokhu, kanye ukubopha nomlomo, wanikeza pullback isibhamu esincane kakhulu. Swivel futhi nokuphakamisa izindlela nge impethu isixhumanisi self-uvala babe hlobo wemboni.
M-31 - isibhamu ongenawo analogue emhlabeni
Kulesi isibhamu Kwatholakala a azifani ngempela. Ngakho, futhi ububanzi kwaba 27.800 amamitha (cishe 28 amakhilomitha), nokuthi ngesikhathi Isivinini sokuqala indiza projectile 880 m / s. M-31 isibhamu kwaba ifakwe ngqo umlilo isibhamu TP-47A, futhi kokudubula ezikhundleni ehlanganiswa - ZIS-3.
Njengoba sekushiwo, njengoba base chassis ACS nge umthamo eliphezulu ithangi IS-7 ( "Into 715") wakhethwa. Nokho, iphrojekthi self ezinezinjini okufakiwe aluvunyiwe, futhi ngenxa yalokho waba waphindiselwa efektri sibuyekeze. Kule ndaba, okwakudinga wokubuyekeza olukhulu amathuluzi isakhiwo, nakuba izimangalo kubalulekile ikhomishana akuvelanga. Le misebenzi ziye ezenziwa №172 engxenyeni yokuqala ka-1948, futhi 23 Agasti, i-Main wezikhali Directorate weKhomishana waphinda kubhekwe olubuyekeziwe. Nokho, ngalesi sikhathi "injongo 261" sinqatshelwe. Nakulokhu futhi, nabaqambi ushintshe isitshalo №172 isibhamu iphrojekthi, noma kunalokho, imishini yayo.
Phakathi naleso sikhathi, ngo-Leningrad KB ...
Nakuba Permian futhi "conjured" phezu ithuluzi, enhloko-dolobha kwamasiko licishe konke sekumi ngomumo. Ingabe-7 kwaba kakade eduze ukukhiqiza efektri yomugqa. Njengoba kushiwo ngenhla, onjiniyela sebejwayele udizili kule ithangi; amandla akhe ayebekelwe 1050 hp Ochwepheshe bezifo, "Into 261" kwaba ukufinyelela ijubane 55 km / h futhi linebanga km-300. I isibhamu laselikhala kuhlelwe ukuba ibekwe endaweni evulekile ukukhanya gumbi zempi. Lolu khetho aqede ngokuphelele ACS iqhaza ithangi Duels. Kodwa wheelbase wezikhali uhlelo kwesokunxele zempi kakhulu, ngokusobala, ngoba ubunye ethangini IS-7. Wawunodonga zempi ukujiya kusuka 150 mm kuya ku-215 mm. "Into 261" ocime ngempela ezisindayo: isisindo wakhe kwaba amathani 68. Lapho umsebenzi yacishe eseqedile, uhulumeni belahla KUNJALO-7 amathangi ukukhiqizwa. Ngakho, naphezu umsebenzi kwenziwe, iphrojekthi aluvunyiwe, nokuthi ACS yanyatheliswa kuphela njengoba imodeli zokuhlola.
World of Tanks: «Into 261»
Manje emuva "Tank World" umdlalo. Lapha, le wezikhali ukufakwa Onjiniyela isibaluli inqubo ezingeni leshumi, esiphezulu esakhiweni. Encazelweni yalokho into kuthiwa uthe SAU Soviet Nokho, has a ithuluzi enembile, kanye high speed ezindizayo projectiles kanye namandla okubakhona kakhulu, ngenxa flat trajectory labadubuli, le lesion target elitholakala ngemva isithiyo, kunzima kakhulu. Uphenyo "Into 261" ku ACS 212A, intengo ukutadisha okunjalo 273 000 udlala isipiliyoni. Njengazo zonke izinto ezingeni lweshumi umdlalo, lokhu kuyikhono elite, ngakho ukudonsa ayidingeki. Esikhathini isithombe ngezansi ungabona ukuthi kuyinto "Into 261".
Hyde enikeziwe game Onjiniyela
Ngosizo World of Tanks uchaza indlela ukudlala lokhu kulungiselelwa ne ukusebenza kahle kunabo bonke. Ngokuphathelene kukhethwa isikhundla, kubalulekile ukuba acabangele trajectory eliphansi indiza projectile, Ngakho-ke, lapho abanye ACS Ufaka kalula izinhlamvu, ukufakwa yethu ingena odongeni. Ngakho-ke Kunconywa njalo bafune izindawo ezintsha, kusukela lapho kuyinto elula nomlilo, ikakhulukazi kusukela ukushesha kanye ngesivinini esiphezulu kuyivumela ukuba wenze kanjalo. Futhi lapha kuthiwa lokhu amabalazwe idolobha Arte ngcono ukulandela iqembu amathangi yakhe bese adubule izitha projectiles udibi Ukubhoboza, Kulezo zimo ukuba osendlini kuyinto 360 mm, futhi umonakalo - 1100 HP. Uma ACS laphazamisa isitha, kungcono ukushintsha ukuthunyelwa ngaphandle kokulibala; Kulezo zimo, izimbangi ukushiya "umthuthi" 261 th "isidlo". Fire kufanele esekelwe amathangi enamandla kakhulu, kodwa uma isinqumo: ukuqedela KUNJALO-8 / ST-1, noma umonakalo IP-7 / IS-4, kangcono ukuze uhlale inguqulo yokuqala. Ngaphezu kwalokho, kungcono nomlilo ngaso amathangi medium itholakale ezweni evulekile, kunalokho ukuba ungaguli kakhulu, icashe izithiyo. Ngenxa yokuthi i-ukuzilawula ngokuzenzekelayo libhekene umonakalo ongaphakeme-alpha, Kungcono ukusebenzisa BB-amagobolondo, okuyinto, lihambisana ukunemba okuphezulu kanye amakhefu kungasilimaza kakhulu kunoma ethangini. Ungasebenzisa futhi anti-umbuso - ke oluqinisekisa ukuhamba kuqhathaniswa eliphezulu ingxoxo yethu mayelana nale ndaba, okuyinto "Into 261".
"World of Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha" ibonisa eziningi izinzuzo nezingozi wezikhali iyunithi. Izinzuzo:
- sezitimela ezinejubane kakhulu umdlalo ashona ezingeni 10;
- trajectory ecindezelekile ekahle kakhulu lapho kubhujiswa nezitha emithambekeni okuphambene;
- Ngenxa yakho konke lokhu SAU wezikhali has ukunemba eliphakeme;
- enamandla kakhulu BB-amagobolondo;
- Ukuhamba okusezingeni eliphezulu.
- izinhlamvu ezincane;
- engaba encane ukundiza izingcezwana;
- kuka elincane;
- umonakalo uma ziqhathaniswa;
- trajectory ngicindezelekile, okuyinto akuvumeli amagobolondo ukudlula phakathi isithiyo sina.